Ọtụtụ puku ụgha ụgha na ọdịdị ihu na Wales | Akụkọ akụrụngwa
2.000 ụgha positives na ọdịdị ihu na njedebe ikpeazụ Njikọ Njikọ
Eder Esteban | | Noticias, Technology
Anyị na-ahụ otú ọdịdị ihu technology na-inweta ọnụnọ. Ọbụghị naanị na ekwentị mkpanaaka, kamakwa na ojiji ndị ọzọ dịka nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, ndị uwe ojii Welsh jiri ya mee ihe na Njikọ Njikọ Njikọ ikpeazụ n'afọ gara aga. N'ihi nkà na ụzụ a, ha na-enwe ike ịmata ndị dị ize ndụ ma ọ bụ ndị na-achọ ihe.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-akatọ ịrụ ọrụ nke ọma maka ọdịdị ihu. Ihe a ga-ajụ ajụjụ ọzọ na ọnụ ọgụgụ bara uru na asọmpi Champions League a. Ebe ọ bụ na ọnụego kụrụ dị obere 7%, yana ihe karịrị 2.000 ụgha ụgha. Datafọdụ data na-adịghị akpali ọtụtụ obi ike.
Ndị uwe ojii jiri usoro a mee ihe n'oge ngwụcha asọmpi ahụ. A ngụkọta nke Ihe ngosi 173. Ọ bụ ezie na ihe ngosipụta bụ na enwere ụgha abụọ 2.297. Nke na-ewetara anyị na 7% a ka anyị tụlere. Mana ndị uwe ojii Welsh na-ekwu na afọ ojuju ha nwere na ọrụ a. Ebe ọ bụ na ekele maka teknụzụ a, ha ejidela njide 450 n'ọtụtụ ikpe.
Ebumnuche nke ịmata ihu bụ mepụta algọridim nke a na-ebugo ihe osise nke ndị dị ize ndụ ma ọ bụ ikiri. N'ụzọ dị otú a, algorithm ga-enwe ike ịchọta ndị a. Na mgbakwunye inwe ike ịmata ha site na igwe mmadụ n'ihe omume dịka Champions League. Yabụ ọ na - agbalite usoro nhazi mpaghara ọtụtụ.
N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ nke ụgha ụgha nke ọdịdị ihu a, ndị uwe ojii na-ekwu na ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ụdị usoro a. Ma ka oge na-aga, ha na-emeziwanye. Ya mere, onu ogugu a ga-ebelata nke nta nke nta. Na mgbakwunye, ha na-ekwukwa na ihe onyonyo ndị UEFA na Interpol nyere dị obere.
Ha amakwa nsogbu na nchekasị nke nnabata ihu na-ebute site na nzuzo. Ya mere, ha nwere olile anya na a ga-ewebata usoro iji hazie nke a ma nweta nguzozi. Ihe doro anya bụ na ọ bụghị oge ikpeazụ anyị ga-anụ maka nsogbu ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » 2.000 ụgha positives na ọdịdị ihu na njedebe ikpeazụ Njikọ Njikọ
HTC ọkwa ọkwa mwepụta nke HTC U12 na iPhone 6 Components
Etu esi tinye ma mee ka ebook ọ bụla kwekọọ na Kindle gị site na iji Telegram